Maalin: Janaayo 28, 2019
'Certificate of Appreciation' ee loogu talagalay Shaqaalaha buuxinta 20 Sanadka MOTAŞ
Munaasabadda lagu qabtay xarunta maamulka ee MOTAŞ, Maareeyaha Guud Enver Sedat Tamgacı wuxuu siiyay Shahaadada Qiimaynta Leh shaqaalihii dhammeystay 20 sano cutubyada kala duwan ee hay'adda shaqadooda. Hasbihal oo la socota shaqaalaha barnaamijka [More ...]
Danta Muhiimka ah ee Fikradda Duufaanta Dabka
14, oo laga soo abaabulay Çambaşı Plateau ee degmada Kabadüz, oo ay soo abaabushay Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu iyo Dawladda Hoose ee Kabadüz. Çambaşı Snow Festival renkli waxay ahayd goobta sawirro midab leh oo dhacdooyin badan leh. 2 Kun Altitude Dhir udgoon [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa helida baabuurta u dhaxaysa da'da 16 iyo 1998 iyo gawaarida da'da weyn oo leh 1997. Waqtiga Gaarsiinta Gawaarida 31 Disember 2019 [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay balaarineysaa Khadka Tooska ah ee Akçaray Tram, kaas oo u adeega inta udhaxeysa Saldhigga Baska iyo Sekapark Science Centre, laga bilaabo Sekapark ilaa Xeebta Beach. 2,2 km marxaladda koowaad ee xariiqda cusub waa 600 kun mitir [More ...]
Duqa afarta degmo wuxuu weydiisan doonaa Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Turhan inuu ku dhaafo magaalada Ayaş Tunnel, oo sanado badan shaqeyneysay. [More ...]
Tan, CHP's Greatakın'in "Kartepe Metro ilaa mustaqbalka"
Orhan Tanis, xubin ka tirsan golaha degmada AKP Buyuksehir waa gudoomiyaha degmada Buyuksehir Tahir Buyukuyakakn 'â € artCartepeâ €. Kuwa aan maarayn karin, 10 wuxuu sheegay in bilyanka rodol lagu aasi doono ciidda hoostiisa [More ...]
RayHaber 28.01.2019 Warbixinta Shirka
Kars-Iğdır-Raadinta Wadada Tareenka ee Dib-u-eegida Dib-u-eegista Qorsheynta iyo Adeegyada Engineering
Gudoomiyaha Xisbiga AK Party iyo Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa ka qeyb galay “Shirka Gudbinta Musharaxiinta AK Party Gaziantep dülenlen ee lagu qabtay Hoolka Sportiga Karataş ee Karataş. Xyorooyinka Maarso ee 31 in lagu soo xusho Xilliga Xulashada Maxalliga ah ee 2019 [More ...]
Ka dib markii la joojiyay Kemantburgaz Dekovil / Railway Line Tender, mashruuca soonaha ayaa sidoo kale la joojiyay. Difaaca kaymaha Waqooyi, “Si mustaqbal loogu helo Istanbul, dhaqaaluhu uma soo gudbiyo cadaadisyada magaaladu sinaba ugama sii jeedo dhanka woqooyi. [More ...]
4 inta u dhaxaysa Sivas-Malatya 40 saacadood inta udhaxaysa safarka tareenka inta udhaxeysa Malatya-Sivas 19 daqiiqad qiimaynta iyo kulanka guddiga qiimeynta (IDK) XNUMX ayaa la qaban doonaa Febraayo. Habka EIA wuxuu ka bilaawday inta udhaxeysa Sivas iyo Malatya [More ...]
Noocyada: "3. Waxaan dooneynaa inaanu rakaabka ku kaxeyno Maarso Axdiga Hawlgabka ee Etap
Mashruuca Nidaamka Tareenka ee 3.Stage Varsak-Otogar, oo muujinaya in wadida tijaabada ee Madaxweyne Menderes Türel, uu sheegay inay hadafkoodu yahay inay qaadaan rakaabka bisha Maarso. Türel wuxuu yidhi, ka dhaadhici dadaalkayaga aan ugu soo qaadanayno mashaariicda muhiimka ah Antalya way sii socon doonaan kadib 2019. [More ...]
Shirkadaha Shiinaha ka Turkey si ay wax qandaraas ah ee deegaanka metro ka tüdemsaş'l 51% wax soo saarka gudaha si ay u gutaan looga baahan yahay si ay u qiimeeyaan iskaashiga si Sivas yimid. Saraakiisha CRCC, oo soosaara qaybo baabuur-wade oo ay TSI xaqiijisay, [More ...]